ज्येष्ठ नागरिकलाई लुम्बिनी भ्रमण | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / फिचर समाचार / ज्येष्ठ नागरिकलाई लुम्बिनी भ्रमण
ज्येष्ठ नागरिकलाई लुम्बिनी भ्रमण
Posted by: युगबोध in फिचर समाचार, स्लाइड March 14, 2019	0 57 Views
प्युठान । प्युठान नगरपालिका– १ खैराका ५१ जना नागरिकलाई लुम्बिनी भ्रमणमा लगिएको छ। फुलबारी एकीकृत ग्रामीण विकास संस् था नेपालले उनीहरुलाई बुधवार भ्रमणमा लगेको हो। संस् थाले २५ औं स् थापना दिवसको अवसर पारेर साविकको खैरा गाविसका ३४ जना बृद्धा र १७ जना बृद्ध गरी ५१ जना जेष्ठ नागरिकलाई भ्रमण लगिएको संस् थाका महासचिव निर्मला पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो। जेष्ठ नागरिकको सम्मानका लागि भ्रमणमा लगेको उहाले बताउनुभयो। उहा“ले भन्नुभयो– ‘वार्षिक उत्सवमा सम्मान गर्ने कार्यक्रम सधैका वर्ष झै यस वर्ष पनि सञ्चालन गरेको हो।’ वार्षिक उत्सवमा अघिल्ला वर्षहरुमा जेष्ठ नागरिकका लागि गरिएको सम्मान भन्दा यो कार्यक्रम उपयुक्त भएको उहा“ले बताउनुभयो।
खैरा गाउ“मा ब्राम्हण, क्षेत्री, जनजाति, दलित लगायतको बसोबास रहेको छ। कसैकसैले छुवाछुतलाई मन पराए पनि संस् थाले गरेको भ्रमणमा सबै जातजाति एकै भइ समानरुपले खुसी साथ समावेश भएको महासचिव पोख्रेलले बताउनुभयो। उहा“ले भन्नुभयो– ‘यो भ्रमणले छुवाछुत, जातभातको पनि अन्त्य हुने विश्वास लिएको छु।’ जेष्ठ नागरिकलाई संस् थाले एक दिनको लुम्बिनी भ्रमण कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। बुधवार बिहान चिया बिस् कुट खुवाउनुसंगै खा“दा ओढाएर भ्रमणमा पठाएको उहा“ले बताउनुभयो। संस् थाका सदस् य गोविन्द्रबहादुर बस् नेतको नेतृत्वमा जेष्ठ नागरिकलाई भ्रमण गराएको समेत उहा“ले जानकारी दिनुभयो। भ्रमणमा ६५ वर्षदेखि ८५ वर्षका जेष्ठ नागरिकहरु सहभागी हुनुभएको थियो।
स्थापना दिवसमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम
२०५० सालमा भैलो खेली रु २५ सय जम्मा गरी स् थापना गरिएको संस् था अहिले २५ वर्ष पुगेको छ। २५ वर्षको लामो अवधिमा यस संस् थाको दुई रोपनी जग्गा सहित एउटा तालिम केन्द्र, दुईवटा दुईतले भवन रहेका छन्। विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी तथा दातृ निकायहरुसंग साझेदारी तथा समन्वय गरी संस् थाले आफ्ना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको संस् थाका अध्यक्ष गुणेन्द्रबहादुर बस् नेतले जानकारी दिनुभयो। संस् थाले हालसम्म सामाजिक परिचालन, कृषि तथा पशुपालन, वन तथा वातावरण, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, क्षमता तथा सीप विकास, उद्यमशीलता र आर्यआर्जन, बचत, ऋण, तथा घुम्तीकोष परिचालन, भौतिक पूर्वाधार विकास, सुशासन लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरु जिल्लाभर सञ्चालन गरेको संस् थाका अध्यक्ष बस् नेतले बताउनुभयो।
संस् थाले आफ्नो स् थापना दिवसमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गर्ने भएको छ। फागुन २९ गते पत्रकार सम्मेलनसंगै जेष्ठ नागरिकलाई लुम्बिनी भ्रमण भ्रमणबाट शुरु गरिएको कार्यक्रम चैत्र ५ गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने अध्यक्ष बस् नेतले बताउनुभयो। उहा“का अनुसार प्युठान अस् पतालका बिरामीहरुलाई फलफुल वितरण तथा रक्तदान कार्यक्रम, एक दिवसीय जिल्लास् तरीय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता, खैरामा जिल्लास् तरीय लोक गीत प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको छ। त्यस् तै खैरा गाउ“ तथा संस् था परिसर सरसफाई र औपचारिक कार्यक्रम गरी स् थापना दिवस मनाउने अध्यक्ष बस् नेतले बताउनुभयो। राम्रो कामको शुरुवात गाउ“बाट पनि सम्भव छ भन्ने नारासहित अगाडि बढेको संस् थामा हाल एक सय ४५ सदस् य आवद्ध छन्। हाल यस संस् थाले कृषि स् वास् थ्य तथा बैकल्पिक जीविकोपार्जन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, सुशासन तथा जीविकोपार्जन परियोजना, गरिबी निवारण कोष कार्यक्रम, आइ.पि.एम. कृषक पाठशाला कार्यक्रम र आइ.एन. म्याप्सका कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ ।
Previous: समस्यामा रेउघा अस्पताल
Next: सुशासनयुक्त प्युठान बनाउन अन्तक्र्रिया